NextMapping | २०२० मा रिमोट वर्कको उदय - यसलाई तपाईंको कम्पनीमा कसरी सफल बनाउने
मैले लेख्ने क्रममा हामी एक कोरोनाभाइरस महामारीको बीचमा छौं। २०२० मा हामी टाढाको कामको उदयमा छौं।
विद्यालयहरू बन्द छन्, रेस्टुरेन्टहरू बन्द भइरहेका छन् वा सेवाहरू बाहिर निकाल्नको लागि मात्र परिवर्तन भएको छ, एप्पल जस्ता खुद्रा विक्रेताहरूले स्टोरहरू बन्द गरिसकेका छन् र हरेक उद्योगले यस ठूलो अवरोधले असर गरेको छ।
Years बर्ष अघि हाम्रो शोधले २०२० सम्ममा workers०% कामदार टाढाबाट काम गर्ने स .्केत गर्यो। जबकि त्यो तथ्याistic्क अझै जन्मेको थिएन, अहिलेको रूपमा केही उद्योगहरूमा काम गर्ने of२% काम गर्नेहरू अब कोविड १ to को कारणले टाढाको रूपमा काम गरिरहेका छन्।
धेरै उद्योगहरूले रडारमा टाढाको काम गरेका छन् किनकि नेताहरूले जानेका छन् कि टाढाको योजना योजनाले दुबै कामदारहरूलाई आकर्षित गर्ने र उनीहरूलाई राख्नको क्षमता बढाउँदछ।
यद्यपि धेरै उद्योगहरूले टाढाको कामतर्फ कदम चालेका थिएनन् किनकि उनीहरूले यसलाई काम गर्ने बनावट देख्न सक्दैनन्। अब जब हामीसँग एक विश्वव्यापी अवरोध छ रिमोटको कामहरू व्यवसायको लागि एक अत्यावश्यक आवश्यकताको रूपमा बाध्य पारिएको छ।
यस हप्ता घरबाट काम गर्ने व्यक्तिको संख्या द्रुत रूपमा बढेको छ। वर्णमाला सिफारिस गरिएको उत्तर अमेरिका, युरोप, अफ्रिका, र मध्यपूर्वमा रहेका आफ्ना सबै कर्मचारीहरूले अप्रिल १० सम्म घरबाट काम गरिरहेका छन्। अमेजनले विश्वव्यापी रूपमा सबै कामदारहरूलाई भनेका छन् जुन मार्चको अन्त्यसम्म घरबाट काम गर्न सक्षम छन्। ट्विटर, माइक्रोसफ्ट र एप्पल लगायत अन्य टेक कम्पनीहरूसँग छ सोधे कर्मचारीहरु घर बाट काम गर्न को लागी, अन्य दर्जनौं छ साना कम्पनीहरू.
यदि तपाईंको कम्पनीसँग टाढाको कार्य योजना छैन भने यो छोटो अवधिमा काम गर्न र लामो अवधिको योजनाको लागि तयारी गर्न सक्ने योजना बनाउन ढिलो भएन। टाढाको कामको बृद्धिलाई कम्पनीहरूले एक सफल योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ।
सबैभन्दा पहिले हामी स्पष्ट गरौं कि त्यहाँ कामदारहरू छन् जुन एक दशक भन्दा बढी समयदेखि टाढाबाट काम गर्दै आएका छन्। रिमोटको काम टेलीकॉममिटि as जस्तो छैन।
टाढाको काम भनेको घरको कार्यालय वा कम्पनीको हेड अफिसबाट टाढा स्थानबाट गरिन्छ। साथै, सबैजना टाढाको काम गर्नका लागि उपयुक्त छैन। को कौशल एक प्रभावशाली दूरदराजको कामदार हुन आवश्यक छ एक स्व-स्टार्टर हुनु, उत्कृष्ट समय प्रबन्धन कौशल, भर्चुअल टोलीसँग काम गर्ने क्षमता र पर्यवेक्षण नगरी परिणाम प्राप्त गर्ने क्षमता समावेश गर्नुहोस्।
त्यहाँ केहि मजदुरहरू छन् जसले टाढा धेरै राम्रोसँग काम गर्नेछन् र संघर्ष गर्ने अरूहरू पनि हुनेछन्। संकट आफैं तनावपूर्ण छ र यसले सबै कामदारहरूको लागि उत्पादकतालाई असर गर्न सक्छ।
विशेष रूपमा दुर्गम कामदारहरूको लागि विश्वव्यापी स stress्कटको तनावले स्वयं प्रबन्धन गर्ने क्षमता, टोली सदस्यहरूसम्म पुग्न सक्ने क्षमता र ठूलो चित्रमा ध्यान केन्द्रित रहने क्षमतालाई असर गर्न सक्छ।
२०२० मा टाढाको कामको उदयको साथ यहाँ यसलाई कसरी सफल बनाउने हो।
पहिले, कम्पनी लेन्स मार्फत हेरौं:
रिमोटको काम एक तथ्य हो भनेर वास्तविकतालाई स्वीकार्नुहोस् र एक पटक कोरोनाभाइरस संकट समाप्त भएपछि पनि कम्पनीहरूको लागि एक नयाँ सामान्य हुनेछ। तपाईंले पहिले टाढाको काम प्रस्ताव गरेको छ वा अवधारणा को लागी नयाँ हो कि यसलाई सामना गर्नुहोस् योजना 'आवाश्यक' परिवर्तन '।
गर्नुपर्ने कामको समीक्षा गर्नुहोस् र यसलाई टाढा टाढा कसरी गर्न सकिन्छ। धारणालाई चुनौती दिनुहोस् र सोध्नुहोस्: "के कार्यालयमा काम गर्नु आवश्यक छ?"
रिमोटको कामका लागि ठूलो चुनौती मध्ये एक हो कम्पनीहरूले टेक्नोलोजी उपकरणको अभाव वा सुरक्षित ठाउँमा सुरक्षा प्रोटोकल राखेको छ। लाभदायक सुरक्षित उपकरणहरू जस्तै जूम, सुस्त, IM, माइक्रोसफ्ट टोली, Webex, र अन्य टेक्नोलोजीहरू जसले मजदुरहरू बीचको वास्तविक समय संवादको लागि अनुमति दिन्छ साथै उपकरणहरू वास्तविक समयमा सहयोगी बनाउन।
टाढाको कामको लागि ती नयाँलाई प्रशिक्षण र समर्थन प्रदान गर्नुहोस्। उनीहरूलाई प्रविधि उपकरण प्रयोग गरेर अभ्यास गर्न र भिडियो / अडियो / स्क्रिन सेयर प्रयोग / कसरी व्यक्तिलाई बैठकहरू र अधिकमा थप्ने भनेर हिंड्नको लागि अनुमति दिनुहोस्। Google ले टाढाको कामका उपकरणहरूको कसरी लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने बारे नि: शुल्क उपकरण र प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ।
सबै दुर्गम कामदारहरूको लागि सञ्चार दिशानिर्देशहरू सेट अप गर्नुहोस् (उदाहरणका लागि, सबै सम्पर्क जानकारी एक ठाउँमा, प्राथमिक संचार च्यानलहरू स्पष्ट - ईमेल, आईएम, स्ल्याक, आदि); कसरी कर्मचारीहरु लाई ग्राहकहरु लाई प्रतिक्रिया गर्न को लागी आशा गरीएको छ; र कसरी र कहिले टोली समन्वय गर्नेछ र भेट्दछन्।
परिणामहरूको डाटा ट्र्याकिंग जस्ता प्रदर्शन मापन गर्न नयाँ तरिकाहरू सेट अप गर्नुहोस्। यो एआई वा डाटा एनालिटिक्सको प्रयोग गरेर मापन गर्न सकिन्छ जस्तै प्रोग्रामहरूको प्रयोगको माध्यमबाट SalesForce। टाढाको कामदारलाई कस्तो सफलता देखिन्छ भन्ने स्थापना गर्नुहोस् (जस्तै प्रति दिन ग्राहक कलको संख्या, सम्पन्न परियोजनाहरूको संख्या, बिक्री संख्या)।
नेताहरूले टाढाका कामदारहरूसँग स्थिर जडान सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ - यसको मतलब हप्तामा एक वा दुई पटक प्रविधि मार्फत आमनेसामने कुराकानी गर्नुपर्दछ। पाठ, आईएम र ईमेल मार्फत जाँच गर्दै समर्थन वा मार्गदर्शन प्रस्ताव गर्न। टिमको प्रयासलाई पुरस्कृत गर्दा चुनौतीहरू पहिचान गरेर टाढाको टोलीलाई उत्प्रेरित राख्नुहोस्।
भविष्यको लागि परीक्षण अवधिको रूपमा यस वर्तमान समयलाई हेर्नुहोस् जुन धेरै टाढाको काम गर्दछ। हाम्रो PREDICT मोडेल प्रयोग गर्नुहोस् रणनीतिक रूपमा तपाइँको कम्पनी मा टाढाको कामको भविष्य योजना गर्न।
हाम्रो अर्को ब्लग पोष्टमा, म ती व्यक्तिहरूको लागि रणनीतिहरू साझा गर्नेछु जो दुर्गम मजदुरहरू हुन् कसरी प्रेरित, संलग्न र उत्पादक रहनका लागि। यदि हामी तपाईंको र तपाईंको कम्पनीलाई तपाईंको टाढाको कार्य योजनाको साथ मद्दत गर्न सक्दछौं भने कृपया हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् michelle@nextmapping.com।